Ukukhangiswa kwezezimali kubangelwa ukuthi kungenzeka isifunda esithile, kuhlanganise nezingozi ezingenzeka. Ukukhangiswa kokutshala izimali zezifunda ngayinye kubalwa ngesisekelo semininingwane yezibalo ezinkombandlela eziyisishiyagalombili. Lokhu kungukuqashwa kwabantu, ukuhlinzekwa kwezezimali, ukutholakala kwamandla okukhiqiza, ukufunwa kwabathengi, ingqalasizinda, ukutholakala kwemithombo yemvelo, ukuthuthukiswa kwemboni yezokuvakasha kanye nemisha. Ngenqubo yokutadisha idatha yezibalo esifundeni, izici ezihlukahlukene ezivimbela ukuthuthukiswa kwendawo yokutshala izimali esifundeni nazo zikhonjisiwe futhi zibhekwa. Lelizinga lokulawulwa kwentela, izinga lokuthuthukiswa kwabasebenzi, ukuphazamiseka kwemali yezimali ezibhekele ezabelomali emikhakheni ethile yomnotho.
Izingozi zokutshala izimali zibalwe ngokugcwele, ngokusekelwe ezinkingeni ezilandelayo: ukuphatha, ezezimali, ezemvelo, ubugebengu bezenhlalakahle ngokubuza imibuzo kanye nokuqhathanisa imibono yobuchwepheshe kusuka kubamele ukutshala izimali kanye nezakhiwo zebhange. Izinkomba zokuheha ezitshalomali zakhiwe ngesisekelo sezindlela ezahlukene, ngokusekelwe kwedatha efanayo yezibalo. Uma wenza izinqumo zokutshala izimali, indima ebalulekile idlalwe yizenzo zomthetho ezithinta imiphumela yemisebenzi yokutshala izimali, kanye nokuhlola nokucwaninga. Okubaluleke kakhulu kulezi zifundo kukhona ukuhlolwa kochwepheshe okwenza isithombe esiphelele sokuheha kwenkimbinkimbi yokutshalwa kwezimali. Ukuhlolwa kochwepheshe, kuhlangene nezindlela eziphambili kakhulu, kunikeza ithuba lokuhlola amandla okuthuthukiswa kwesifunda. Ukukhangiswa kokutshala izimali ezifundazweni ukutshalwa kwezimali okuqhubekayo kubalwa ngesisekelo sokuhlaziywa kwezinkomba ezikhethiwe ezisetshenziselwa ama-ejensi okulinganisa owaziwayo, kanye nokusetshenziswa kwezinqubo ezihlala njalo nezomhlaba wonke zokuhlola isimo sezomnotho zezifunda ngayinye. Izinga leengozi lihlukaniswe laba amaqembu amakhulu ayisishiyagalolunye anamakhono aphezulu, aphakathi nendawo aphansi. Ngaphezu kwalokho, idatha etholakalayo kanye nezinkomba zokuthuthukiswa okunamandla kulinganiselwa ngesisekelo somzimba wabo wesisindo. Ngenxa yalezi zifundo, ukukhangiswa kokutshala izimali kunqunywa futhi indawo ethize yesifunda ilinganiselwa ekutshalweni kwezimali ezalandela.
Umqondo obaluleke kakhulu ekufezeni lezi zibalo kanye nezifundo kulo lonke elaseRussia Federation ukuthi lonke izwe liyaziqaphela lisebenzisa izinyathelo ezihlukahlukene zokugqugquzela ukuthuthukiswa komnotho ngamunye, kucabangela ukuthuthukiswa kwayo, izici ezikhona kanye nokuthuthukiswa kwezinhlangano zomhlaba ngamunye. Ngesikhathi esifanayo, ukukhangisa kwabo kokutshala izimali kukhula ngokushesha. Ngenxa yomjovo wombuso onjalo, kukhona ukuguquguquka kokukhula okuqhubekayo ekuthuthukiseni isakhiwo sezindawo zezimboni nezokulima. Ukuqaliswa kwemiklamo eminingi emisha ehlobene nokuthuthukiswa kwezindlela zokuthutha, izimboni kanye nezokulima kuvumela ukwenza ukusebenza okuzinzile kwezinkomba ezithembekile zokuthuthukiswa kwalesi sifundazwe, esikunikeza ukufinyelela kwezinga elisha eliphakeme nelinamandla lokuthuthukiswa okuqhubekayo okuqhubekayo. Ngakho-ke, ukuheha okutshala izimali kuyothuthuka, futhi ngesikhathi esifanayo izici zokuncintisana kwazo zonke izindawo zomasipala ezithintekayo inqubomgomo yokutshala izimali kahulumeni zivezwe. Ukuthuthukiswa okwesikhashana kanye nesikhathi esifanele kuzo zonke izindawo zeRussia Federation kanye nezinzuzo zabo zomnotho ezinhle - yilokho okuyinhloko kuzo zonke izimali zokutshalwa kwezimali?
I-oven convection: yini okufanele ucabange uma ukhetha
Imizi ngobukhulu ekhatsi Bashkortostan
Inqubo yokwehlisa isisu emzimbeni wesifazane: izimpawu kanye nokwelashwa